Imiyalelo yoLawulo loMongameli: Umxholo
Amagosa eSigqeba soMongameli
'IGunya eliPhezulu liya kuthiwa ...'
Umyalelo wokulawula uongameli (EO) ngumyalelo okhishwe kuma-arhente karhulumente, iintloko zesebe, okanye abanye abasebenzi baseburhulumenteni nguMongameli wase-United States phantsi kwamagunya akhe ngokomthetho .
Ngeendlela ezininzi, imiyalelo yesigqeba soongameli zifana nezikhokelo ezibhaliweyo, okanye imiyalelo ekhishwe ngumongameli wenkampani kwiintloko zesebe okanye kubalawuli.
Kwiintsuku ezingamashumi amathathu emva kokupapashwa kwiRejista yeSithili, iilawulwa zolawulo ziqala ukusebenza.
Ngethuba besenza i- Congress ye-US kunye nenkqubo yokwenza umthetho ngokomthetho , akukho nxalenye yesigqeba esilawulayo inokuyalela ii-arhente ukuba zenze imisebenzi engekho mthethweni okanye engekho mthethweni.
UMongameli uGeorge Washington wanikezela umyalelo wokuqala wokulawula ngo-1789. Ukususela ngoko, bonke abaongameli base-US bakhuphe iilawulwa ezilawulayo, ezivela kwi-Presidents Adams , Madison naseMonroe , owathumela omnye kuphela, kuMongameli uFranklin D. Roosevelt , owathumele i-3,522.
Izizathu zokuSusa iiNkundla zoLawulo
AbaPhathiswa baphathisa imiyalelo yesigqeba esisodwa kulezi njongo:
1. Ulawulo lolawulo lwegatsha elilawulayo
2. Ulawulo lolawulo lwee-arhente okanye iziphathamandla
3. Ukufezekisa uxanduva lomongameli okanye umgaqo-siseko
Iimpawu zoLawulo oluPhezulu
Ngo-1970, uMongameli uRichard Nixon wasebenzisa lo myalelo olawulayo ukuseka i-arhente entsha, i-National Oceanic kunye ne-Atmospheric Administration, phantsi kweSebe lezorhwebo.
Kungekudala emva kweDisemba 7, 1941, ukuhlaselwa kwePearl Harbor, uMongameli uFranklin D. Roosevelt wakhupha uMyalelo we-9066 , uqondisa ukufakwa kwabangaphezu kwe-120,000 baseJapan baseMerika, abaninzi babo abemi base-US.
Ngokusabela ekuhlaselweni kwamagorha kaSeptemba 11, 2001 , uMongameli uGeorge W. W. Bush wakhupha lo myalelo olawulayo odibanisa i-arhente yokunyanzeliswa kwamagunya angaphezu kwama-40 kunye nokudala iCandelo leKhabinethi kwiSebe lezokuKhusela koMhlaba.
Njengenye yezenzo zakhe zokuqala ezisemthethweni, uMongameli Obama wakhipha umyalelo olawulayo othi abanye abathi bamvumela ukuba afihle iirekhodi zakhe - njengesiqinisekiso sakhe sokuzalwa - esivela kuluntu. Enyanisweni, umyalelo wawunomgomo ohluke kakhulu .
Ngethuba lokuqala kweentsuku eziyi-100 kwi-ofisi, uMongameli we-45 uDonald Trump wanikezela imiyalelo engaphezulu kweso sikhundla kunanoma yimuphi umongameli. Uninzi lwaMongameli weTrump ye-oda lolawulo lwasekuqaleni lujoliswe ukuzalisekisa izithembiso zakhe zephankaso ngokuchithwa kwemigaqo emininzi yomongameli wakhe wokuqala. Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo kunye neengxabano zale miyalelo esilawulayo:
IsiGqeba esiLawulayo sokunciphisa Umthwalo wezoQoqosho woKhuselo lweMonde kunye noMthetho woNonophelo oThathaka
I-E No. 13765 Isayinwe: NgoJan. 20, 2017: Umyalelo waguqula imibandela ye-Care Affordable Act - i-Obamacare - into athembisa ukuba "iya kuphinda ibe yindawo" ngexesha lephulo.
Ukuphucula ukuKhuselwa koLuntu kwi-International United States
I-E No. 13768 Isayinwe ngoJan. 25, 2017: Umyalelo, ojoliswe ekunciphiseni ukufuduka okungekho mthethweni, wenqatshelwe imali yesibonelelo se-federal kwizixeko ezibizwa ngokuba ziyingcwele .
Ukukhusela isizwe esivela kwiNgqungquthela yezizwe zobuGebengu e-United States
I-E nombolo 13769 isayine uJan 27, 2017: Umyalelo okwexeshana wokumiswa kwamanye amazwe kumaSulumane aseSiriya, i-Iran, i-Iraq, iLibya, iSudan, i-Yemen neSomalia
Ngaba iMirhumo yoLawulo iyakwazi ukuxhatshazwa okanye ukurhoxiswa?
UMongameli angenza izilungiso okanye aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphumelele. Umongameli angaphinda akhuphe umyalelo olawulayo olawulayo okanye umyalelo olawulayo owenziwe ngumbuso okhishwe ngabengameli. Abalawuli abatsha abangenayo banokukhetha ukugcina imiyalelo elawulayo ekhutshwe ngabaphambili babo, bawuthathe indawo yabo entsha, okanye baxoshe abadala ngokupheleleyo. Kwiimeko ezinzima, iCongress ingadlulisela umthetho oguqula umyalelo olawulayo, kwaye unokubhengezwa ngokungahambisani nomgaqo-siseko kwaye uchithe iNkundla ePhakamileyo .
IziGqeba eziLawulayo kunye neziBhengezo
Izimemezelo zikaMongameli ziyahluke kwiimigqaliselo ezilawulayo kuba ziba ziimimiselo endalo okanye zijongene nemicimbi yorhweba kwaye ingaba okanye ingenzi mthethweni. Iigosa ezilawulayo zineempembelelo zomthetho zomthetho.
Igunya loMgaqo-siseko loLawulo oluLawulayo
Isiqendu II, icandelo 1 lomgaqo-siseko wase-US lifunda, ngokwengxenye, "Igunya elilawulayo liya kunikwa umongameli we-United States of America." Kwaye, iCandelo II, icandelo 3 lichaza ukuba "UMongameli uya kukunyamekela ukuba imithetho iqhutywe ngokuthembeka ..." Njengoko uMgaqo-siseko ungachazi ngokucacileyo amandla olawulo , abagxeki bee-oda ezilawulayo bathi le mihlathi emibini ayichazi igunya lomgaqo-siseko. Kodwa, abaMongameli baseUnited States ukususela eGeorge Washington baye baxela ukuba benza kwaye bawasebenzise ngokufanelekileyo.
Ukusetyenziswa kwamhlanje kweeNkundla zoLawulo
Kuze kube yimfazwe Yehlabathi I , imiyalelo yolawulo yayisetyenziselwa izinto ezincinci, eziqhelekileyo ezingabonakaliyo zorhulumente. Lo mendo waguquka ngokugqithiseleyo kwinqanaba leMfazwe yamandla ka-1917. Lo msebenzi wanyuswa ngexesha le-WWI wanika umongameli amandla okwethutyana ukuba enze ngokukhawuleza imithetho elawula urhwebo, uqoqosho kunye nezinye iinkalo zomgaqo-nkqubo njengoko zineentshaba zaseMelika. Icandelo eliphambili leMfazwe yamandla likwaqulethe iilwimi ngokuthe ngqo ngaphandle kwabemi baseMerika kwimiphumo yalo.
UMthetho woMkhosi weMfazwe wawusasebenza kwaye wawungatshintshi kwaze kwaba ngo-1933 xa uMongameli osanda kutyunjwa uFrank D. D. Roosevelt wathola iMelika kwinqanaba lokutshatyalaliswa kweNtlupheko enkulu . Into yokuqala eyenziwa yi-FDR yayikudibanisa iseshoni ekhethekileyo yeCongress apho yazisa khona ibhilikhwe eguqula uMthetho woMkhosi weMfazwe ukususa isigatya esingabahlali baseMelika ukuba bangaboshwa yimiphumo yabo. Oku kuya kuvumela uMongameli ukuba achaze "iimeko eziphuculweyo zelizwe" kunye nemithetho engahambelaniyo yokubambisana nayo.
Olu lungiso olukhulu luvunyiwe yizo zombini izindlu zeCongress ngaphantsi kwemizuzu engama-40 ngaphandle kwengxoxo. Kwiiyure kamva, i-FDR ivakalise ngokusemthethweni ukuxinezeleka "kwimeko engxamisekileyo yesizwe" kwaye yaqala ukukhupha umtya wesigqeba esilawulayo eyadala ngokuphumelelayo kwaye yaqalisa inkqubo yakhe ebizwa ngokuba yi "New Deal".
Ngelixa ezinye zezenzo ze-FDR zenzeka, mhlawumbi, umbuzo ophazamiseka ngokomgaqo-siseko, iimbali ngoku ziyabavuma njengokuba bancedise ukukhupha abantu besaba ngakumbi kwaye baqala uqoqosho lwethu endleleni yokubuyisela.
Izikhokelo zoMongameli kunye neMemorandam efana nezoLawulo eziLawulayo
Ngamanye amaxesha, iinqununu zinikezela ii-arhente zamasebe ezilawulayo ngokuthi "izikhokelo zikaMongameli" okanye "imemorandam kamongameli," endaweni yee-oda zomlawuli. NgoJanuwari 2009, iSebe lezoBulungisa base-United States lanikezele ingxelo evakalisa izikhokelo zooMongameli (iimemorandam) ukuba zibe nempembelelo efanayo kunye nemigqaliselo yolawulo.
"Umyalelo wongameli unomphumo ofanayo osemthethweni njengendlela yolawulo oluyintloko. Yiyo into eyenziwa ngumongameli onokumisela, kungekhona uhlobo loxwebhu oludlulisela loo ntshukumo," wabhala wabamba i-Attorney General i-US Randolph D. Moss. "Bobabini umyalelo osisigqeba kunye nomyalelo wongameli uhlala uphumelele ekutshintsheni kolawulo ngaphandle kokuba kuchazwe ngolu xwebhu, kwaye zombini ziqhubeke zisebenza kuze kube yinto ethatha isenzo somongameli."
Incwadi Eqinisekisa uAbraham Lincoln nguGay
Ukuphela kwexesha lokuVunywa koMongameli
Ngokumalunga noMongameli weNgqungquthela
Yintoni uMyalelo oyiNtloko kaMongameli?
Inkcazo yeDame yeLame kwizoPolitiko
UFranklin D. Roosevelt Iinkcukacha ezifutshane
UBill Vetoes Bill Ukuqhawula umhlala-phantsi wamaPresident, Izibonelelo
Umbuso weeNtetho zeNyunyana
Isingeniso kwixesha elidlulileyo lesiFrentshi elingenasicatshulwa -Infinitive Passé
Iplani ye-Gunpowder ye-1605: uHenry Garnet kunye namaJesuit
Imfazwe Yehlabathi II: I-Hawker
Oko Kuthetha Ukuba Nomkeli Ongeke Ufikeleleke
Isitayela seGoogle Genealogy
Ibhokisi iBadget Bugs, Boisea trivittatus
Imigqaliselo ebalulekileyo yeCopyediting
Isicelo sakho seSikolo seGreyd: Musa ukulibala iCandelo leKholeji yakho
Ukubuyiswa kweRecous Acoustic - I-'80's Folk's Singer-Songwriter Revival Profile
Yintoni i-Swimmer's Ear?
Ukuguqulwa kweMelika: iiGeneral General Horatio Gates
I-silica Tetrahedron ichazwa kwaye ichazwa
Uhlalutyo luka-'Yaziwabi 'ngo-Ursula K. Le Guin
Ngaba iProtheyini ePhakamileyo yeZakhiwo zokuThuthukiswa kweNdlu ekudakaleni kweMpilo yeeNtliziyo?
McLaughlin v. Isizwe saseFlorida (1964)
Idama kunye noDamn
Iintsikelelo ezibalaseleyo zokunqoba kwiMbali yeNdebe yeRyder
Funda indlela yokudlala ibhola eli-3
Ukubandakanywa - zombini i-Practice Practice kunye neFiophysical Education
Izimo zeengcinga: Iimzekelo zesiNgesi